प्राइम लाइफ इन्सुरेन्सको २ लाख ७१ हजार कित्ता सेयर लिलामीमा, फारम भर्न कहाँ जाने ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » प्राइम लाइफ इन्सुरेन्सको २ लाख ७१ हजार कित्ता सेयर लिलामीमा, फारम भर्न कहाँ जाने ?
काठमाडौं - प्राइम लाइफ इन्सुरेन्सको बुधबारदेखि सर्वसाधारण समूहको २ लाख ७१ हजार ९७८ कित्ता सेयर लिलामी खुला भएको छ । लगानीकर्ताले न्यूनतम १०० रुपैयाँलाई आधार मानेर जेठ ९ गतेसम्ममा प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रमा सहभागी हुनुपर्नेछ ।
यसमा बिक्री प्रबन्धक लक्ष्मी क्यापिटल नयाँ वानेश्वर, काठमाडौंबाट बोलपत्र फारम लिन र बुझाउन सकिनेछ । त्यसैगरी, लक्ष्मी बैंकको वीरगञ्ज, विराटनगर, बुटवल, पोखरा, सुर्खेत, नेपालगञ्ज र धनगढी शाखाबाट पनि लिलामी भर्न मिल्नेछ ।